यसरी पर्दा फास भयो दिक्षा चापागाईंको कर्तुत | onlineharpal.com
on: १३ पुष २०७३, बुधबार १५:२७ In: bignews1, समाज
उनका लागि आवश्यक पर्ने औषधि लिएर फर्कदै गर्दा मीना दिदीलाई समाएर दीक्षाले लैजादै थिइन । दीक्षाको व्यवहार देखेर हामी हेरेका हेर्यै भयौ । दीक्षाका अनुसार,मीना यस अगाडि उनकै घरमा चार वर्ष अगाडि देखि काम गर्न महिला थिइन । अपहरणशैलीमा उनले मीना दिदीलाईै स्कूटरमा बसालेर लगिन । मीना दिदीले खाइरहेकोे मानसिक रोगको सारा दबाई अस्पातालमै छुट्यो । प्रश्न उठाउने ठाँउ यही छ,पाँच वर्ष देखि दीक्षाको घरमा काम गरिरहेकी वेवारिसे महिला कसरी गर्भवती भइन ? यस्को पछाडिको रहस्य के छ ? दीक्षाको धन्दा के हो ?
यदी उनको मन र समाजसेवा साच्चैको पवित्र हो भने आफैले अस्पतालमा भर्ना गरेको यी विरामीलाई अलपत्र पारेर किन छाडिन ? मानसिक रोगको दबाइ खान पर्न स्थितीसम्म कसरी पुर्याइन ? अस्पताल छाडेर मीना दिदी भाग्दा उनको खोजी किन गरिन दिक्षा चापागाईले ? उनको कोखबाट जन्मेको तर बचाउन नसकिएको बच्चाको शव अहिले पनि पाटन अस्पतालको शवगृहमा वेवारिसे अवस्थामा छ । करिव चार महिनासम्म दीक्षाले अपहरणशैलीमा मीनालाई भगाएसँगै दीक्षा विरुद्ध हामीले काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा उजुरी समेत दर्ता भइसकेको छ । दीक्षाले भने आफूलाई सोही वीर अस्प्तालका डाक्टर पियुषको निर्देशनमा मीनालाई लिएर गएको दावी गरेकी छिन । शंका गर्ने ठाँउ प्रवल छ डा पियुष र दीक्षाबीचको नाता सम्बन्ध के हो ?
सोझो श्रीमानलाइ ब्युटीपार्लरमा जान्छु भन्दै यौन धन्दा मच्चाउँदा
पाँचथरमा गाइ काट्दा काट्दै रंगेहात एकजना व्यक्ति पक्राउ
३ फाल्गुन २०७४, बिहीबार १८:५८